Sep72020 by साहारा संदेशNo Comments
मन्त्री अर्याल गरीब खोज्दै: आखिर किन ? यस्तो छ कारण
ज्ञानगुन, नेपाल, राजनिती, समाचार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्यमा अर्यालले हलियाहरूको पूनस्र्थापनाको लागि अझैपनि गरिब पहिचान गर्ने काम भइरहेको स्पष्ट पारेकी छिन् । आइतबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भनेकी छिन्,‘त्यसमा पनि सरकारको ध्यान छ । अहिले पनि उनीहरूलाई हलियाकै नामले सूचीकृत गर्नेभन्दा पनि अब हलियाको पुनस्र्थापनाको लागि अझै पनि गरिब पहिचान गर्ने काम भईरहेको छ । सन् २०३० सम्ममा यो संख्यालाई शुन्य पार्ने सरकारको लक्ष्य छ । यही लक्ष्य राखेर सरकार अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अब जीवन बदल्ने प्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू ल्याएर स्थानीयस्तरमा जाने भन्ने कुरा छ ।’ प्रस्तुत छ मन्त्री अर्यालसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : आज हाम्रो देशमा हलियामुक्तीको कुरा गर्दाखेरि १२ वर्ष पूरा भएछ तर उनीहरूले अझै पनि सेवा/सुविधा प...
Jun252020 by साहारा संदेशNo Comments
काठमाडौ । पुरुष र महिलामा को उत्कृष्ट । समान भनिन्छ तर मेरो विचारमा महिला नै उत्कृष्ट छन् किनभने महिला सहनशील, सुन्दर र गर्भ धारण गरेर सन्तान जन्माउने प्राणी हुन् । पुरुषप्रधान समाजमा विभिन्न बोझ र जिम्मेवारीले थिचिनुका बाबजुद सारा चुनौती चिरेर पनि नेपाली महिला उच्च पदमा पुग्न सफल छन् । महिलामा भएका यस्ता गुण, क्षमता एवं विशेषताले उनीहरूलाई उत्कृष्ट बनाएको छ । म महिला नै हुनुपर्ने एउटै मात्र कारण छैन । शारीरिक रूपमा पुरुष भएर जन्मिए पनि भावनात्मक रूपमा म महिला हुँ । मभित्रको विचार, व्यवहार, धैर्य, सहनशीलता अनि ममता नै म महिला बन्नुपर्ने कारण हुन् । घरपरिवार, बालबच्चा, कार्यालय मात्र होइन देश हाँक्ने र सम्हाल्ने हरेक महिलाले पुरुष भएको अनुभूति गर्न सक्छन् तर हरेक पुरुषले आफूलाई महिला अनुभूति गर्न गार्हो छ । संसारका जुनसुकै कुनामा गए पनि पुरुषत्व हाबी छ । जस्तोसुकै विकसित मुलुक र उच...
Sep92019 by साहारा संदेशNo Comments
यी बार अनुसार लगनले काम गर्दा यति धेरै फाइदा हुने: पुरै पढ्नुहोस
ज्ञानगुन, सोसल मिडिया
आइतबारः– आइतबार राज्याभिषेक गर्ने , गीत, वाध्य, पलाकिमा बस्ने, राजसेवा, गाइगोरु किन–बेच गर्ने , हवन गर्ने, मन्त्र–उपदेश गर्ने, औषधी निर्माण गर्ने, शास्त्र ,सुन, तामा, उनी, बस्त्र आदि किनबेच गर्ने, रातो बस्तुको कारोबारलगायत उपयुक्त मानिन्छ। सोमबारः– त्यसैगरी सोमबारका दिन शास्त्रले यज्ञ गर्नु गराउनु उपयुक्त मान्दछ । गार्इ–भैसी, घोडा, फूल, घास, वृक्ष्य, मोति, चाँदी आदिको किनबेच गर्नु, स्त्रीको संगत गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। मंगलबारः– भेद गर्नु , अनैकतिक काम गर्न, शास्त्रबर्धन, संग्राम, कपट, दम्भ, सैन्य राख्नु , सुबर्ण ,धातु , मुगा ,रक्ताश्राव कार्य गर्नु शुभ मानिन्छ। वुधबारः– यस बारमा चातुर्य, दक्षता, पुण्य आर्जन , अध्ययन गर्नु , शास्त्रसेवा गर्नु , शास्त्र चिन्तन गर्नु , चित्र लेखन गर्नु, वास्तु कला , नोकरी गर्नु, बादबिबाद गर्नु शुभ मानिन्छ । विहीबारः– धार्मिक कार्य गर्नु , नवग्रह प...
Aug282019 by साहारा संदेशNo Comments
ज्ञानगुन, मनोरञ्जन, समाचार, स्वास्थ्य
१. पानी: गर्मीमा प्रशस्त पानी पिइएन भने डिहाइड्रेसन हुन्छ। शरीरका नसा र कोशिकाहरूलाई पानीले सिंचित गरिराख्न शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन दिनु हुँदैन। गर्मी महिनामा घामको सिधा असर हुने भएकाले शरिरलाई अत्यधिक पानीको आवश्यकता पर्दछ। यसर्थ, आफ्नै घरमा सफा गरिएको अथवा उमालेको पानी बोत्तलमा बोकेर हिँड्ने र पानी पिइरहने गर्दा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। २. मकै: गर्मीमा मकै पोलेर अथवा उसिनेर खानु कतिपयलाई त्यति रमाइलो नलाग्न सक्छ। तर, मकैमा लुटेन र जेक्सानथिन नामक अक्सिडेन्ट्स पाइन्छन् । यसले सूर्यका हानिकारक विकिरणबाट आँखालाई जोगाउने गर्छ । यसर्थ, मकै खाने सिजन शुरु भएपछि भने टन्नै हरिया मकै खान पाठकलाई सुझाव दिइन्छ। साथै, यसले बुढ्यौलीका कारण आँखा कमजोर हुने समस्यालाई पनि कम गर्छ। ३. गोल्भेडा: त्यस्तै गर्मी महिनामा गोल्भेडालाई पनि अत्यधिक उपभोगमा ल्याउनु श्रेयस्कर हुन्छ। गोलभेँडामा लाइसोपेन नामक ...